ओली र प्रचण्डले बदला लिँदा महराको कन्तबिजोग!::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
ओली र प्रचण्डले बदला लिँदा महराको कन्तबिजोग!
काठमाडौं – दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बने लगत्तै प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मधेस केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई सत्तामा आउन औपचारिक आग्रह गरेका छन् ।
ओली–प्रचण्डको औपचारिक आग्रहसँगै राजपा नेपालले सत्तामा जान केही पूर्वसर्त अगाडि सारेको छ । राजपा नेपालले संविधान संशोधनको लिखित प्रस्ताव र आयो भने सरकारमा जाने जनाएको छ ।
राजपा नेपाल सरकारमा सहभागी भयो भने उसलाई सभामुख पद पनि दिने तयारी ओली–प्रचण्डले तयारी गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एउटै दलको सभामुख र उपसभामुख पाउँदैन । नेकपाले तत्काल यी दुबै पद नेपाली कांग्रेसलाई दिने पक्षमा छैनन् । ओली–प्रचण्डले सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पदबाट हटाएर सो पद राजपा नेपाललाई दिने तयारी भएको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
सभामुख पद आउने भएपछि राजपा नेपालले सो पदमा कसलाई पठाउने भनेर भित्रभित्रै गृहकार्य सुरु गरेको छ । स्रोतका अनुसार राजपाले सभामुखमा संयोजक महन्थ ठाकुरलाई पठाउने भनेर अनौपचारिक परामर्श गरेको छ ।
पार्टी एकीकरणप्रति असन्तुष्ट सभामुख महरासँग बदला लिन ओली–प्रचण्डले यो पद राजपालाई दिने तयारी गरेका हुन् । राजपालाई सभामुख पद दिइयो भने संवैधानिक समस्या पनि नपर्ने नेकपाको बुझाइ छ ।